ဖေဖေမေမေတို့ သိထားဖို့လိုမယ့် ကလေးရဲ့ EQ (စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း) အကြောင်း - Page 17 of 76 - Hello Sayarwon
ကိုယ့်ကလေးကို လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ ဝင်ဆံ့ပြီး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေချင်တဲ့ဆန္ဒ မေမေ ဖေဖေတိုင်းမှာ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဉာဏ်ကောင်းခြင်း IQ တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း EQ လည်းကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ EQ ဆိုတဲ့စကားက အခုနောက်ပိုင်းမှာ အရမ်းခေတ်စားလာတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ EQ ဆိုတာဘာလဲ။ ကိုယ့်ကလေးကို EQ ကောင်းဖို့အတွက် ဘယ်လို ပြုစုပျိုးထောင်ကြမလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်သူအဖြစ်ကြီးပြင်းစေဖို့ လိုအပ်ချက် (သို့မဟုတ်) EQ
EQ (စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း) ဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်၊ အခြေအနေကို လိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တတ်တယ်၊ အခြားသူတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းတတ်ပြီး လိမ္မာပါးနပ်စွာ တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကို ခေါ် တာပါ။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ EQ ဆိုတာ ဘယ်အရာတွေပါလဲ။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ EQ ကောင်းခြင်းကိုသိနိုင်ဖို့အတွက် အချက် (၅)ချက်ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိခြင်း – ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို သိနားလည်ပြီး ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကို သိရှိနားလည်ခြင်းက EQ ကောင်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သားသား စိတ်တိုနေတယ်။ သားသား ဝမ်းနည်းနေတယ် စသဖြင့်ပြောနိုင်တာတွေက ကလေးရဲ့ EQ အနေထားကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း – EQ ကောင်းတဲ့ကလေးတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူဘာတွေလုပ်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကိုလည်း နားလည်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
စိတ်အားတက်ကြွခြင်း – စိတ်အားတက်ကြွပြီး ပျော်ရွှင်ဖျတ်လတ်နေတဲ့ ကလေးက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိခြင်းရဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။
ကိုယ်ချင်းစာတတ်ခြင်း – တခြားသူတွေဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကို သိနားလည်ပြီး စာနာ နားလည်တတ်တယ်ဆိုတာက EQ ကောင်းခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်ပါပဲ။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းခြင်း – ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာ။ တခြားသူတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အတူကစား၊ အတူစားသောက်၊ အတူတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းကလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိခြင်း ပါပဲ။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘယ်လိုတွေကူညီပေးကြမလဲ။
ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာဖို့က ကလေးတစ်ယောက် အကောင်းဆုံးကြီးပြင်းစေဖို့လိုအပ်ချက်ပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ကျန်းမာစေဖို့ ဆိုရင် ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင် C၊ ဗီတာမင် D၊ သံဓာတ်၊ ဖောလိတ်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် တို့ ပြည့်ဝလုံလောက်ဖို့ လိုအပ်မှာပါ။ ဒီအာဟာရတွေပြည့်ဝမှ ကလေးက အရိုး၊ ကြွက်သားတွေသန်မာပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းပြီး ကျန်းမာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေမှာပါ။
ကလေးကို ဦးနှောက် ကောင်းမွန်စွာ ဖွံဖြိုးပြီး ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ထက်မြက်စေဖို့အတွက် ဗီတာမင် A၊ ဖောလိတ်၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ဆီလီနီယမ်၊ ပရိုတင်း၊ သံဓာတ်၊ဇင့်၊ choline နဲ့ Omega -3 fatty acid တို့ ပြည့်ဝလုံလောက်စွာ ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးပေးတာ နဲ့ ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးတာ၊ အိပ်ရေးဝအောင် ဂရုစိုက်ပေးတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
EQ(စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်း) ကောင်းစေဖို့
ကလေးတစ်ယောက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဝင်ဆံ့ပြီး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့လိုအပ်တဲ့ EQ (စိတ်ခံစားမှု ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း) ကောင်းစေဖို့ရော ဘာများလုပ်ပေးရမလဲလို့ သိချင်နေပြီလား……….
EQ (စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်း) ကောင်းဖို့က ဒီလိုလေးတွေ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးဖို့ ကြိုးစားပါ – ငယ်စဉ်ကတည်းက ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးတတ်တဲ့ မိဘတွေလက်ထဲမှာ ကြီးပြင်းရတဲ့ ကလေးတွေက EQ (စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်း) ပိုကောင်းကြပါတယ်။
ကလးတွေ ဖော်ပြတဲ့ ခံစားချက်ကနေတဆင့် သင်ကြားပေးပါ – ကလေးက သူတို့ရဲ့ စိတ်အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြုအမူ အပြောအဆိုလေးတွေကနေတဆင့် ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြလာတဲ့အခါ ဆူတာမျိုး၊ ဟန့်တားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလို ခံစားချက်ဖော်ပြမှုတွေကနေတဆင့် ကလေးကို မှန်ကန်တဲ့ သင်ကြားမှုလေးတွေလုပ်ပေးပါ။
ရင်ဖွင့်ဖော်ဖြစ်ပေးပါ – ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးက မေမေဖေဖေပါ။ ခံစားရသမျှ တွေ့ကြုံရသမျှကို မေမေကိုပြောပြချင်တာမှ မအောင့်နိုင်အောင် ဖြစ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကလေးတိုင်းမှာ ဒီခံစားချက်ရှိစမြဲပါ။ ဒီလိုရင်ဖွင့်လာတဲ့ ခံစားချက်ကို နားထောင်ပေးရင်း ကလေးကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတွေပြန်ပေးနိုင်သူက သူတို့လေးတွေထက် အတွေ့အကြုံများနေတဲ့ မေမေတွေကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
ကောင်း၏၊ ဆိုး၏ ခွဲခြားပြပါ – ကလေးတွေက အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီကို တုံ့ပြန်ပုံတဲ့ပုံစံချင်းလည်း မတူကြပါဘူး။ ဒီလို တုံ့ပြန်မှုတွေထဲမှာ မှန်ကန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေရှိသလို မှားယွင်းတဲ့ အပြုအမူတွေလည်းလုပ်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘာကတော့ သင့်တော်၏၊ ဘာကတော့ မသင့်တော်တာကြောင့် နောက်တစ်ခါ ထပ်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို နားဝင်အောင်သေချာလေး ပြောပြပေးပါ။
ပြဿနာကို ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတတ်အောင် ပျိုးထောင်ပါ – ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်တာက ကလေးကို EQ (စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်း) ကောင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ငယ်စဉ်ကစလို့ ပြဿနာတွေကို ကြုံလာရတဲ့အခါ မေမေဖေဖေတို့က ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ဘေးကနေ ကူညီရင်း ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတတ်စေဖို့ လေ့ကျင့်ပေးပါ။
ကလေးက EQ (စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်း) ကောင်းခြင်း ကနေ ဘာတွေရနိုင်မလဲ………
ဖေဖေမေမေတို့ ရင်နဲ့အမျှချစ်ရတဲ့ ကိုယ်ပွားလေးက EQ (စိတ်ခံစားမှုထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်း) ကောင်းတဲ့အခါ
• ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိမယ်
• စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်လို့ အောင်မြင်တဲ့ဘဝအနေအထားတစ်ရပ်ကို အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
WHAT IS EQ, AND WHY DO YOUR KIDS NEED IT? https://www.yourfamily.co.za/family-life/eq-kids-need Accessed Date 24 February 2020
How to Raise an Emotionally Intelligent Child https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/emotionally-intelligent-child Accessed Date 24 February 2020